Wararka Maanta: Sabti, Nov 21, 2020-Wasiir Duraan Faarax: Dalkeenna wuxuu is beddel ku gaari kara dib u heshiisiin iyo midnimo
Kulankan oo qado ahaa ayaa lagu boggaadiyay dadaallada wasiirka ee ku aaddan nabadeynta ,dib u heshiisiin iyo horumarinta gobolka Mudug, iyadoo sidoo kale ay ka qeybgaleen xubno ka tirsan qeybaha bulshada oo isugu jiray, aqoonyahanno,dhallinyaro iyo haween.
“Duraan saddex bilood ka hor wuxuu gobolka Mudug joogay muddo dheer isagoo waqtigaa u bixinayay nabadeynta iyo dib u heshiisiinta bulshada gobolka, maanta oo uu wasiir soo noqday wuxuu inoo yimid isagoo sida barnaamijyo horumarineed oo bulshada nugul,beeralayda iyo dan’yarta taageeraya,waxaan qirayaa inuu yahay qof ay ka go’antahay is beddel ka dhaca gobolka, waxaan u sheegaya inay bulshada gobolka jecelyihiin oo ay garabkiisa joogsanayaan.” ayuu yiri Suldaan Maxamed Axmed Faarax.
Caaqil Cali Ciise Cali, oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee kulanka ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay qodobbo dhowr ah oo uu ku ammaanay wasiirka inuu ka qabtay gobolka Mudug.
“Gobolkan iyo deegaankan wuxuu u baahanyahay qof sida Duraan Faarax oo kale ah kuma ammaaneyno balse isagoo oo aan xil heyn waxaan ogeyn sida uu dadaalka iyo mas’uuliyada isaga saarayay in laga gudbo marxaladihii kala duwanaa ee deegaankan ka dhacay, sida horumarinta waxbarashada,dhallinyarada iyo nabdeynta.” ayuu yiri Caaqil Cali Ciise.
Wasiir Duraan ayaa uga mahadceliyay odayaasha dhaqanka,waxgaradka, qeybaha bulshada ivo maamulka degmada Galdogob maamuska ay ku soo dhaweeyeen , wuxuuna caddeeyay inuu diyaar u yahay howlihii uu gobolka ka hayay ee nabadeynta iyo horumarinta ay ugu horreysay inuu labo jibbaari doono.
“Maanta waxaan mas’uuliyad u qaadday bulshada Soomaaliyeed iyo dadka gobolka, waxaan mar walba diirrada saarayay in guud ahaan dalka uu ka dhaco is beddel horumarineed oo wax u tara dalka iyo qeybaha bulshada, taas ayaan hadda xoojin oo aan doonaya inan labo jibbaaro, waxaan dadaalka u bixinayay waxaan fahansanahay sida ay dalka iyo dadkeenna muhiim ugu tahay midnimada iyo wadajirka.” ayuu yiri wasiir.
Wuxuu soo hadal qaatay barnaamijyo horumarineed ee deegaanka dhowaan ka fulaya, wuxuuna kula dardaarmay odayaasha dhaqanka iyo wax-garadka in la xoojiyo midnimada ,dib u heshiisiin iyo caddaaladda.
“Degmada Galdogob waxay dhowaan odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada heli doonaan dhisme u gaar ah , dhallinyarada iyaguna waxaan ugu bishaareynaya inuu meel wanaagsan noomarayo dadaalka dib loogu dhisayo dugsiga farsamada gacanta ee degmada, waxaa sidoo kale socda sidii bulshada deegaankan ay u heli lahaayeen garoon diyaaradeed oo baahidiisa ay ka jirto dhulkan.” ayuu raaciyay.
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Soomaaliya iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa toddobaadkan socdaal shaqo ku jooga deegaannada Puntland, wuxuuna kormeer ku tagey deegaanno miyi ah iyo tuullooyin ay ka socda labada mashruuc ee taageeraya qoysaska nugul iyo kuwa uu Ayaxu saameeyay.